Kedụ Ka I Si Ele Ahịa Ọdịnaya? | Martech Zone
Nke a bụ ezigbo infographic sitere na Brandpoint na Successga nke Ọma Ọdịnaya Ahịa. Ọ bụghị ụdị ọdịnaya ọ bụla ga - ebu ire, mana ike na nchịkọta ọdịnaya na - akpali Mmata na echiche, na-eduga na mgbanwe.
Usoro ahia nke ọdịnaya dika blog, ihe omuma, ihe omuma webusaiti, akwukwo ocha, ihe omuma nke ndi mmadu na ndi mmadu weputara ndi mmadu ka ha buru ha. Ahịa ọdịnaya na-amata ụdị gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị; na-akpali ndị na-azụ ahịa itinye aka na ịtụle gị; na-eme ka ha ghọọ ndu na ire ahịa; ma mepụta ndị nkwado.
Tags: Mmataechichecontent Marketingakakabarede
Semrush na-eme ka ndị na-asọ mpi na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị
Jul 25, 2013 na 12: 00 AM
Daalụ maka nke a. Ugbu a, anyị na-atụle ahịa ọdịnaya site na nchịkọta Google na njikọta nke GNIP.